Akwụkwọ 3 kacha mma nke Juan Carlos Onetti › June 2022
Ihe mkpuchi ọkụ Juan Carlos Otti, na-esote Mario Benedetti y Edward Galeano, mepụta mmeri akwụkwọ ọgụgụ site na Uruguay ha niile ruo Olympus nke akwụkwọ ozi n'asụsụ Spanish. N'ihi na n'agbata atọ ha na -ekpuchi ihe niile, ụdị ọ bụla na prose, amaokwu ma ọ bụ na ogbo.
Ọ bụ ezie na onye ọ bụla na -enye akara ngosi ahụ na enweghị ike ịkọ akụkọ (gafere akara ntụgharị nke na -eri nri na ohere ma ọ bụ oge iji nwaa ijikọ ma ọ bụ ịhazigharị), ọ bụkwa eziokwu na ọnọdụ nkekọrịta nke narị afọ nke iri abụọ edobere ebe a na mbuli ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke akụ na ụba na ụdị dị iche iche n'ụwa nke rụtụrụ aka na ijikọ ụwa ọnụ na mkpokọta nke nsogbu ọ bụla, mgbe ụfọdụ ọ na -arụ ọrụ maka nkwekọrịta isiokwu eke.
Ọrụ ebube ndị Uruguayan mere ka mba ndị amamihe atọ a guzoro dịka ndị kacha nwee ọganihu ruo n'etiti narị afọ nke 29, malitere ịta ahụhụ na nsogbu nke XNUMX wee kwụsị na agha ụwa abụọ sochirinụ.
Ọchịchị aka ike nke 70s hụrụ n'ime ndị edemede atọ a nnukwu olu dị oke egwu, na -enyocha ọtụtụ oge wee chụga ya dị ka naanị nhọrọ. Ekekọrịta ndetu dị mkpa nke na -egosipụta n'akwụkwọ ya mmetụta dị iche iche nke nnukwu onyinye okike ya maka ịkatọ na iwepụ ya.
Mana Onetti na -arụtụ aka na ọpụrụiche. N'ihi na ọ bara ụba nke ukwuu tupu ngagharị iwe Boldaberry. Ọ bụ site na 1939 ruo 70s oge nke Onetti jisiri ike dee ọrụ ya kacha sie ike, na -enwe ọmarịcha ịdị adị n'etiti akụkọ na -atọ ụtọ sitere na obodo emepụtara ya, Santa María, ebe ndị odide na -abịa site na oghere ndị ọzọ dị adị n'ezie, na egwuregwu enyo. ndị edemede ole na ole ga -eji ikike yiri nke ahụ kwughachi ya.
Akwụkwọ 3 akwadoro nke Juan Carlos Onetti dere
Ndị niile na -agụ Onetti na -eche ịdị ukwuu nke ọkaibe, nke onye na -akọ akụkọ kpuchiri elu igwe ahụ. Ọ bụ ezie na anaghị m amasị ịkọwapụta nke ọma, ekwere m na anaghị m ehie ụzọ n'itinye aka na ọkwa ahụ agaghịzi arụ ọrụ gara aga ma ọ bụ mgbe e mesịrị.
Juan María Brausen na Stein na -eche ọrụ imechi edemede ihe nkiri ihu. Akụkọ a ga -eme na Santa María. N'ebe ahụ Juan María na -achọta ndị odide ga -adị ndụ ka ha wee chọpụta nchịkọta akụkọ ha.
Nke nta nke nta Brausen na -etinye akụkọ n'ime ndụ ya ka ọ na -atụgharị ndụ ya n'ime akụkọ. Bipolarity nke onye dere mere ọnọdụ dị mgbagwoju anya na nke zuru oke.
Ihe ngọpụ Santa María iji zoo obi amamikpe, obi mgbawa na ụjọ n'etiti okporo ụzọ emepụtara ya. Omume ndị yiri ka ha nwere mkpịsị ugodi na -emepe ọnụ ụzọ maka eziokwu nke Brausen na Brausen nke na -agbatị nrọ ya na echiche echegharịrị ka ọ bụrụ edemede iji banye ọnọdụ na ndụ, dịka nrọ ochie ahụ ịhụ ndị ọzọ ka ha bie ma nwee ọ enjoyụ. obi ụtọ nke ndị ọzọ, na -adọba okwu nke gị ka ọ bụrụ akụkọ ifo.
Mgbe ị na -agwa mmadụ okwu gbasara Onetti, na agbanyeghị ihe ndị a dị n'elu gbasara ihe pụrụ iche, ọtụtụ ndị na -agụ akwụkwọ na -ebu ụzọ ebu ụzọ kwupụta akwụkwọ akụkọ a. Ọ ga -abụ otu n'ime ọnọdụ ya kachasị edozi maka ụwa isi awọ anyị.
N'otu ụzọ, ọ dị ka ọ na -achọsi ike ịga ebe akụkọ ifo dị ka Santa María, nke nwere ike na -enwu n'etiti ịba ọgaranya ma ọ bụ obi ụtọ wee mechaa chọpụta otu iru uju ahụ.
Mana ọ bụ na, dịka ọtụtụ ndị ode akwụkwọ na -ekwu maka oge ụfọdụ, iru uju bụ isi mmalite nke mmụọ nsọ. Nretọ na agụụ agụụ na -eme ka ị nọrọ n'oké ihe okike ma ọ bụrụhaala na ha ewedaghị gị ala. Onetti bụkwa ọkaibe na nzukọ nke akụkọ ifo mere ka ọ nwee mmetụta dị mwute n'ụwa anyị.
Agwa nwere mkpagharị na -adịghị amị mkpụrụ n'ime ụwa a na -eyi. Ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri ndị na -enwe ọganihu nke na -akụda akọ na uche na -ada.
Ozugbo achọpụtara Onetti, ọ bara uru ịkwụsị na akwụkwọ akụkọ a dị mkpirikpi nke nwere ihe nwere nkwupụta nke eziokwu niile, ezigbo akaebe nke onye dere ya. Onetti n'onwe ya kọwara ọrụ a dịka ọkacha mmasị ya, ọbụlagodi mgbe ụfọdụ. A ga -enwerịrị ihe kpatara ya.
Isi okwu a bụ na onye akụkọ akụkọ ahụ nwere ike ịbụ Onetti n'onwe ya, nwogharia dịka onye bụbu onye egwuregwu egwuregwu rutere n'obodo ugwu ama ama maka agwa ịgwọ ụkwara nta.
Ọdịmma ya, ọnụnọ ya na omume iju anya dọtara uche onye na -elekọta ọkwa maka obodo. Nke ka njọ, onye isi agwa na -anata akwụkwọ ozi dị ịtụnanya na, ka ha na -agafe n'aka onye na -ezipụ akwụkwọ ozi nke obodo, na -ede n'ime echiche ha akụkọ kachasị omimi nke agwa agwa mechara chekwaa na ndagwurugwu ahụ dị jụụ.
Obere mkpụmkpụ nke akwụkwọ akụkọ a, ịdị jụụ ya, na echiche onye na -ekesa akwụkwọ na -agbanwe ịdị adị nke ihe niile gbara ya gburugburu na -eme ka ọ bụrụ ihe na -egbu egbu banyere ezumike nká onye protagonist na ọnọdụ ọnọdụ ndụ n'okpuru ụkwụ ugwu.
Tags Juan Carlos Otti, Akwụkwọ akụkọ dị adị
4 kwuru na "akwụkwọ 3 kacha mma nke Juan Carlos Onetti dere"
Pingback: Akwụkwọ 3 kacha mma nke Juan Tallon › Eprel 2022
Pingback: Akwụkwọ 3 kacha mma nke Mario Levrero › Eprel 2022
Pingback: Akwụkwọ atọ kacha mma nke Fernando Butazzoni › Maachị 3
Pingback: 3 akwụkwọ kacha mma site na Horacio Quiroga ›Machị 2021